Gcina imali yakho oyigcinileyo kwimarike yemasheya, kodwa ngolwazi | Ezezimali
Imithombo yeendaba yolwazi ihlala inikezela ngeendaba kunye nedatha enokukunceda ngokuchanekileyo utyalomali lwakho kwii-equities, zombini kwiimarike zesizwe nangaphandle kwemida yethu. Kwaye oko ngokungathandabuzekiyo kuya kunceda ekulinganiseni imeko eyiyo yexabiso, Icandelo okanye isalathiso sentengiso yemasheya. Ezi datha ziya kuthathelwa ingqalelo kakhulu kwiikowuti zakho, kwaye zinokudala into ebalulekileyo yokuqwalasela ipotifoliyo yotyalo-mali oza kuyenza kwiinyanga ezizayo.
Ukulindela ukupapashwa kwayo kunokukunceda Utyalomali lwejelo ngempumelelo ngakumbi. Ukuya kwinqanaba lokuba ungasifaka esi sixhobo sakudala siluncedo kakhulu kubatyali mali abanamava ngakumbi kwiimarike zezabelo, kwaye loo nto ibhekisa kwinto yokuba kukho "ukuthenga ngamarhe kunye nokuthengisa ngeendaba", kwaye ihlala iphantse ihlala ithobela, kwaye oko kunokubandakanya ii-euro ezininzi kwimisebenzi evulekileyo kwintengiso yesitokhwe.
Iinkampani zihlala zivelisa iindaba ezikhuthaza ukuhamba ngexabiso lazo, ngeendlela ezithile zixabisa, kwaye kwezinye zichasene nokuhla. Akumangalisi ukuba abatyali mali abaninzi bayazi ngolwazi oluveliswe kwimarike yezemali, ngakumbi kwimisebenzi yexesha elifutshane. Kwaye ayakuba ngamanqaku aphambili ukumisela ukungena nokuphuma kwiimarike zemali.
1 Ukubaluleka kolwazi
2 Idatha yezoqoqosho
3 Iindaba ezivela kwiinkampani
4 Idatha yesibini
Xa zivela Izaziso ngokunxulumene necandelo lemarike yemasheya, kunokwenzeka kakhulu ukuba kuyakubakho isiphumo kumaxabiso, nokuba kulungile okanye kungalunganga. Akunanto, iinkampani zibuthathaka kakhulu kolu hlobo lolwazi, kwaye ubukhulu becala bakhokele iintshukumo zabo kwiimarike, kwezinye iimeko ngendlela engalindelekanga. Ngokukhethekileyo kukhuseleko lwesibini, oluthatha ukuhla kwamaxabiso abalulekileyo ngenxa yolwazi olupapashwe kumajelo eendaba.
Ulwazi, ke ngoko, lucacile isixhobo somsebenzi esetyenziswe ngabatyali mali ukuze baxhamle. Kwaye kufanelekile ukuba bacinge ukusebenzisa kakuhle imali abayigcinileyo. Ngale ndlela, imithombo yeendaba ekhethekileyo sesona sixhobo silungileyo sokwazi iinkampani ezidweliswe ngcono. Omnye umthombo wolwazi uvela kwidatha ye-macroeconomic (imveliso yasekhaya, ukunyuka kwamaxabiso, ukungabikho kwemisebenzi, inzala, njl. Njl.), Ezipapashwa rhoqo kwaye kulula ukufikelela kuzo.
Zezona ndlela zinenjongo zoku iingxowa zexabiso, nangona ingenguye yedwa. Ngayiphi na imeko, banefuthe kwindaleko yeemarike zezabelo, kwaye banokunika olunye ulwazi malunga nentshukumo ekufuneka uyithathile ukutyala imali. Ngayiphi na imeko, kuya kufuneka uyazi ukuba enye idatha ibuthathaka kunabanye. Kwaye kufuneka uvavanye ukubaluleka kwabo kunye nokungaboni abanokuba nako kutyalo-mali olwenzileyo.
Olu hlobo lwedatha lubanzi kwaye lwahlukile ngokwendalo, kwaye lufikelela kuwe yonke imihla ngeendlela ezahlukeneyo zokusasaza. Ngokuqinisekileyo ujongile indlela iimarike ezisabele ngayo kwinkangeleko yale datha. Kwezinye iimeko bakuncedile kwizikhundla zakho vula, kodwa kwezinye ngelishwa uyakube uphulukene nee-euro ezininzi apha endleleni.
Kuya kufuneka ujonge ezona datha zibaluleke kakhulu kuqoqosho olukhulu eziveliswa rhoqo. Ababhekiseli kwinto enye, kwaye kuyo nayiphi na imeko baya kuba nesigqibo sokusebenza kakuhle kwezalathiso eziphambili zesitokhwe kwihlabathi liphela. Ngaba uyafuna ukubazi? Ewe, apho kuyeyona nto inempembelelo, kwaye icandelo elitsha leenkampani ezidwelisiweyo lixhomekeke kuyo.
Ukungaphangeli: ukwehla kwayo luphawu olulungileyo kwimarike yemasheya ekufuneka ikhuthaze, kuba luphawu lokuba kunokubakho ukusetyenziswa okungaphezulu. Ngale ndlela, kubalulekile ukuba wazi idatha ebonelelwe ziimarike zasekhaya kunye nakwezinye i-economics, njengakwimeko ethile yaseNyakatho Melika, eyona nto ithathe isigqibo sokuvela kwezabelo zaseSpain.
Imveliso yasekhaya encangathi: ebaluleke kakhulu kuzo zonke iingxowa kuba iya kubonisa imeko eyiyo yoqoqosho. Bacinga ukuba kumzuzu obanzi, okanye ukuba okwahlukileyo kukwehla kwamandla emali. Iimarike ze-equity zamkela kakhulu ukukhutshwa kwakho, kunqabile ukuba kungakhathali.
Ixabiso lentengo: Nangona ibaluleke kangako, ikwasebenza ukuvavanya imeko yokwenyani yeenkampani ezidwelisiweyo. Kwaye ukuba kwiimeko ezigwenxa- ukunyuka kwamaxabiso aphezulu, okanye ngokungafaniyo nakuphi na ukwahluka-kunokuba sisizathu sokutshintsha ikhosi yamaxabiso kwilizwe lemarike yemasheya.
Umgangatho wenzala: ulwazi olubalulekileyo lokufumanisa umkhombandlela oza kuthathwa ziimarike zesitokhwe emva kweentlanganiso ezithathwe ngabaphathi bemali kumacala omabini eAtlantic. Ukuncitshiswa kwesiqingatha senqaku kwamkelwe kakuhle ngolwaneliseko ziimarike, ngelixa umlamli ophakathi komqondiso ochaseneyo unefuthe elibi kwixabiso lokhuseleko. Inkcazo ilula okokoko ukwehla kwenqanaba lenzala kubonelela ngemali engcono kwiinkampani kwaye kuhlala kubuliswa ngokunyuka kwamaxabiso ziimarike.
Iindaba ezivela kwiinkampani
Kodwa ayisiyiyo kuphela idatha enkulu yezoqoqosho ethatha isigqibo sokuxhasa ibhalansi kwicala elinye okanye kwelinye. Iingxelo eziveliswe yinkampani ngokwayo zithatha isigqibo ngokulinganayo malunga nokuvela kwayo. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba ziphambili kuhlalutyo olusisiseko. Apho abalamli bezezimali besekwe ukucebisa ngeziqinisekiso ezithile kubathengi babo abaphambili.
Inye into ekufuneka usoloko uyithathela ingqalelo kukuba zonke iinkampani ezidweliswe kwimarike yemasheya, zombini kwiimarike zikazwelonke nakwamanye amazwe, kufuneka zithumele iziphumo zazo kumaqumrhu asemthethweni asemthethweni. Ngokukodwa, eSpain bayithumela kwiKhomishini kaZwelonke yoThengiso lweNtengiso (CNMV) kwaye zisasazwa esidlangalaleni ngamajelo eendaba onke. Banyanzelekile ukuba bazipapashe rhoqo emva kweenyanga ezintathu, oko kukuthi ngekota.
Iiakhawunti zakho zeshishini zibalulekile ukujonga impilo yenkampani: inqanaba lamatyala, ukukhula, ukuhamba kwemali, njl.. Zikwasetyenziswa ngabahlalutyi beemarike ukuguqula okanye ukuphinda baqinisekise uluvo lwabo malunga nenkampani, kwaye ke, ukuyabela ixabiso elitsha ekujoliswe kulo. Ngale ndlela, banokuba sisikhokelo malunga nokuba ungayenza phi na ipotifoliyo yotyalo-mali ngendlela efanelekileyo kunye nokuthembeka okukhulu.
Kodwa ayisiyiyo kuphela idatha okanye iingxelo zeshishini ezinefuthe, kukwakhona nezinye iiparameter ezinokuthi zihambe zingabonwa kodwa zinokuba nefuthe ekusebenzeni kweemarike zestokhwe, Ukusuka kwisibhengezo sonyuso lweemali ezinkulu ukuthengwa okunokwenzeka oza kuyenza njengenxalenye yenkqubo ebanzi. Kuya kubaluleke kakhulu ukuba amaxabiso. Banokukunika ngaphezulu kwesikhombisi esinye sokungena kwiimarike ze-equity. kwaye oko kunokuba lulwazi olulandelayo.
Imisebenzi yokufumana izintoI-OPAS eyaziwayo ibangela ukonyuka okunamandla kwixabiso labo kuba kubonakala ukuba amanye amaqela eshishini aya kungena kwizabelo zawo. Ukuphazamiseka okukhulu ekufikeleleni kwayo kungenxa yokuba ulwazi olunqunyelwe kakhulu, okanye olona lubi kakhulu, lulawulwa phantsi kwamahemuhemu anokuthi angabi nasiseko senjongo yokufudumeza ixabiso.
Inqanaba letyala: Iya kuba sisibonakaliso sokwenyani kwenkampani kunye nokukwazi kwayo ukuyiphelisa, ekwanempembelelo ekuveleni kwexabiso layo. Ngamatyala aphezulu, kuya kuba nzima ngakumbi kukhuseleko ukuseka uzinzo oluzinzileyo. Kwaye nakweyiphi na imeko bakhuthaza ukungazinzi kwamaxabiso abo ukuba enyuke, ngamanye amaxesha ngomsindo omkhulu. Abona batyalomali banoburhalarhume baba ngabamkeli bale misebenzi.
Awukayisebenzisi yonke imithombo yolwazi ukumisela utyalomali, kude lee kulo. Abarhwebi kunye nabalamli bezemali rhoqo rhoqo upapasha iingxelo eziluncedo ekuthatheni iX-reyi yenkampani ephantsi kohlalutyo nesetyenziselwa ukukunceda uthathe izigqibo zakho ngokubhekisele kwiimalike zezabelo.
Kwezi ngxelo, ezinye zazo zipapashwa yimithombo yeendaba ekhethekileyo, eyona datha ibalulekileyo yeenkampani iyasasazwa. Kwaye banokuba nefuthe kwindlela abathatha ngayo kwiimarike zezemali. Zombini ngengqondo nakwezinye. Ukubanika, kwelinye icala, ixabiso ekujoliswe kulo kwizabelo zabo, ezinokuba yindawo ekubhekiswa kuyo kwizenzo zakho ezilandelayo.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba amaxabiso ekujoliswe kuwo ayithethi ukuba eli lelona xabiso lakho lokurhweba. Basenokungaze bafikelele kuloo manqanaba, okanye ubuncinci iminyaka emininzi. Olu lwazi olubonisa ngakumbi kunexabiso lokwenyani. Ungakulibali ukuba awufuni kumangaliswa kwiiveki ezimbalwa ezizayo.
Ingcebiso yokuba abameli bezemali baya kukunika kwezokhuseleko ekuthethwa ngayo iya kuba ngamanqanaba amathathu: thenga, thengisa okanye ubambe. Ngophononongo olusisigxina olusekwe kwidatha ebonelelwe yinkampani. Kwaye oko kukhokelela kubarhwebi kutshintsho olukhulu kakhulu kwiingcebiso zabo. Kwaye ngaphezulu komzuzu omnye unokukuphazamisa.
Njengoko ubonile kule nqaku, imithombo yolwazi onayo inkulu kakhulu, kunokuba ungacinga njalo ekuqaleni. Kuya kufuneka uzixabise kuphela, kwaye ukhethe ngakumbi ezo zikunika ukuthembeka okukhulu ukwenza imisebenzi yakho kwizabelo. Kwanele ukuba zimbalwa kuzo, ukuze kungabikho ngxaki ebomini bakho xa ulungiselela ipotifoliyo yakho yotyalo-mali. Nangona kunjalo, uya kutyala imali ngokhuseleko olukhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Gcina imali yakho oyigcinileyo kwimarike yemasheya, kodwa ngolwazi
Ezona ngxowa zingaqhelekanga emhlabeni